Hetauda Khabar - अब हेटौंडाका सडकमा तीब्र गतिमा सवारी कुदाउन नपाइने, राडर गन प्रयोग गरि कारवाही
पहिलो दिन ८ सवारी कारवाहीमा
ट्राफिक प्रहरी नभएको फाइदा उठाउँदै तपाईं हेटौंडा वरिपरी तीब्र गतिमा सवारी चलाउँदै हुनुहुन्छ? त्यसो गर्दै हुनुहुन्छ भने सावधान ! तपाईँलाई ट्राफिक प्रहरीले राडर गन तेर्स्याउन सक्छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी मकवानपुरले बुधबारबाट तीब्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई परैबाट राडर गन (गति मापन यन्त्र) को प्रयोग गरी कारवाही गर्न थालेको छ । प्रहरीले सडक छेउमा बसेर राडर गन मार्फत गुडिरहेको गाडी कुन गतिमा गुडेको छ पत्ता लगाउन थालेको हो ।
त्रिभुवन राजपथ, कान्तिराज पथ तथा पुर्व-पच्छिम राजमार्गमा तिब्र गतिमा सवारी चलाउनेलाई चालककै अगाढी प्रमाण सहित कारवाही गर्नकालागी प्रदेश ३ कार्यालयबाट राडर गन मगाएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विरेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिनुभयो ।
बजार क्षेत्रमा प्रतिघण्टा २० देखि २५ किलोमिटर मात्र गुड्न सकिने सडकमा प्रतिघण्टा चालिस किमीसम्म गुडाउने र ४० किमीको सडकमा निकै तिब्र गतिमा सवारीसाधन दौडाउन थालेपछि राडर गन प्रयोग गरिएको ट्राफिकको भनाइ छ ।
ट्राफिक प्रहरीले राडर गन प्रयोग गरेको पहिलो दिननै हेटौडामा ८ वटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् । बुधबार बस्तीपुर, चौकीटोल र कान्तिराजपथमा प्रहरीले राडर गन तेर्साएको थियो । बस्तीपुरमा ४ वटा, चौकीटोलमा २ वटा र कान्तिराजपथमा २ वटा सवारीका साधन कारवाहीमा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अनावस्यक बत्तीहरु निकाल्दै प्रहरी
केहिदिन यता ट्राफिकले सवारीसाधनमा राखिएका अनावस्यक बत्तीहरु पनि निकाल्न थालेको छ । विभिन्न स्थानमा प्रहरी बसी आफैले बत्ति निकाल्दै कारवाही गर्दै आइरहेको छ । अनावस्यक बत्ति जोडेर बाल्ने गरेकाले दुर्घटना बढ्दै गएको र त्यस्ता सवारीलाई ५०० देखि १५०० सम्म जरिवाना तिराइने मकवानपुर ट्राफिक प्रहरीले बताएको छ ।
ठुलो आवाजमा मोटरसाइकल कुदाउन नपाइने
त्यस्तै अब देखि हेटौडा बजार वरपर अन्य व्यक्तिलाई असर पुग्ने गरि ठुलो आवाजमा मोटरसाइकल हुइकाउन पनि नपाइने भएको छ । ओर्जिनल आवाज बिगारेर जसले मोटरसाइकलको आवाज ठुलो बनाउछ उसको साइलेन्सर पाइप नै झिकिदिने र परिवर्तन गर्न लगाउईने ट्राफिक प्रमुख ठाकुर बताउनुहुन्छ । पछिल्लो समय बिशेष गरी युवाहरुले बुलेट मोटरसाइकलको आवाज परिवर्तन गराउने गरेका छन् ।